ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ… – PVTV Myanmar
·9months ago ·38 Comments
ဒုတိယသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၏ ပြည်သူသို့ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ (၈) ရက်။
Like – 40K Share – 7533
2021-05-08 at 2:35 PM
NUGအနေနဲ့မြို့သိမ်းနယ်သိမ်းနိူင်ငံသိမ်း စသင့်ပြီ (မအလ က ပျူစောထီးအဖွဲ့ နဲ့ ပြည်သူ ကိုအနှိပ်စက်မခံနိူင်ဘူး)
2021-05-08 at 2:37 PM
သိသောသူများ အမြန်ဖြေပေးကြပါလားနော် ဘယ် TVကနေ ဖမ်းလို့ရလဲ
Yê Naung says:
2021-05-08 at 2:41 PM
Khin Chit Chit Khine says:
ဒုတိယသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ ကျန်းမာပါ​စေ။ ငြိမ်းချမ်း
Kohteinwin Kohteinwin says:
2021-05-08 at 3:00 PM
လေးစားရပါသည် သမ္မတ ကြီး
NUG အနေနဲ့ ဥပါဒေ အများပြဌါးပြီး နိုင်ငံတကာ ကျေငှါဖို့လိုမယ်ထင်တယ်….. အရေးကြီးဆုံးက မြန်မာနိုင်ငံသူ / သား အားလုံးတန်းသူနေထိုင် ဆက်ဆံ တဲ့ ဥပဒေ / နောက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ ညီကိုမောင်နှမ တွေရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ရေး ဥပါဒေ / နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဥပါဒေ…… တာတွေကအစ မလုပ်နိုင်ရင် ကဘာက NUG ကိုအသိမှတ်ပြုဖို့တော့ခက်မယ်…… ပြု့မယ်လို့လည်းမထင်ဘူး……
Jang Maw says:
2021-05-08 at 3:04 PM
K.K rau rai na grau jailang u ga
2021-05-08 at 3:21 PM
ဒီနေရာလေးက Mobile fb user တွေမှာ Logo ကိုဖုံးနေပါတယ်။ အသေးစိတ်ကအစ ပိုကောင်းလာအောင် အကြံပြုပေးပါရစေ။
Winnie Tun says:
It’s so encouraging ! Thanks for the speech …
Win Cho says:
2021-05-08 at 3:34 PM
သမ္မတ ကြီး ကျန်းမာပြီး တိုင်းပြည်တာဝန်များကို အရေးတော်ပုံ အောင်တဲ့ အထိ ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ
2021-05-08 at 3:40 PM
ယုံကြည် လေးစားပါတယ် ခင်ဗျာ.. သမ္မတ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ
Sakura NwayOo says:
Thank you Mr. Vice President. We all Myanmar citizens fully support NUG.
Cho Mar Htwe says:
2021-05-08 at 3:46 PM
It’s so encouraging!Thank you🙏
2021-05-08 at 3:51 PM
ေလးစား အားကိုး ၾကပါသည္ ဒုသမၼတႀကီး ။
အေရးေတာ္ပံု မုခ် ေအာင္ရမည္။
Hpung San says:
2021-05-08 at 3:52 PM
လေးစားပါတယ် ရဝမ် ဝတ်စုံ လေးနဲ့ ဂုဏ်ယူပါတယ်
Zaw Winn says:
We are much honored to be with Your Excellency
2021-05-08 at 4:15 PM
စဥ့်ကို သုတ်ဿန်မှာ ညတိုင်းလိုလို လူသေအလောင်တွေ ညင့်နက်လာလာရှိ့နေပါတယ် မအလ စခ. ရခ. တွေကပါ
2021-05-08 at 4:33 PM
ရိုဟင်ဂျာ အရေးကိုလဲ အမှန်တကယ် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ ဘက်ကနေ ရှူမြင်ကိုင်တွယ်စေချင်ပါတယ်။
ဒါက နိုင်ငံတကာ အကူအညီရဖို့ အရမ်းလမ်း‌ေကြာင်းကောင်းပါတယ်။ နောက်မှ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက် အတူနည်းလမ်းရှာလို့ရပါတယ်။
လူကိုလူချင်း မမြင်နိုင်သေးရင် ကျွန်တော်တို့ စစ်ကျွန်သက်တမ်းကြာနေရဦးမှာပါ။
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပဲ တိုက်မယ်။ နိုင်ငံတကာ မလာလဲနေပါစေ။ ရိုကိစ္စလက်မခံဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေ ပိုပြီး အသက်တွေဆုံးရှုံးကြရမှာပါ။
ရိုဟင်ဂျာအရေးကို အမြန်ဆုံး မီးစိမ်းပြစေချင်ပါတယ်။
ဘယ်သူမှာလဲ ချက်ချင်း‌လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုမနေပါဘူး။
‌အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါ မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်အရိပ်အောက်ကလွတ်ပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပဲ ပိုမိုဆက်ဆံရတော့မှာပါ ။ လူအခွင့်အရေး၊ လူသားအခွင့်အရေး သာ အဓိကစံထားတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ပဲ ဆက်ဆံကြရမှာပါ
အဲ့အခါ ရိုဟင်ဂျာ လူ့အခွင့်အရေးမှာ ကိုယ်က မျက်နှာလွှဲခဲ့မိရင် မြန်မာပြည်တိုးတက်ရေး နှောင့်နှေးရပါလိမ့်မယ်။
2021-05-08 at 4:40 PM
ဒုသမ္မတကြီး ဒူဝါလရှီးလ ကျန်းမာပါ​စေ ​ဘေးကင်းပါ​စေ ကျွန်မတို့ ပဲခူး​မြေမှ ဆုမွန်​တောင်း​ပေးပါတယ်။ ပြည်သူ​တွေ​ပေါ်ထားတဲ့​​မေတ္တာ ​ရောင်ပြန်ဟပ်လို့ ပြည်သူ​တွေမှလည်း ဒုသမ္မတကြီးကို ချစ်ခင်​လေးစားဂုဏ်ယူမိ​ကြောင်းပါရှင့် 🙏
Phyu Lwin says:
2021-05-08 at 5:24 PM
Khin Maung Aye says:
2021-05-08 at 5:38 PM
။သမတကြီးကျမ်းမာပါစေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။God bless you all.
Maneki Nekô says:
2021-05-08 at 5:45 PM
Kasha Lahpai says:
2021-05-08 at 5:49 PM
2021-05-08 at 6:33 PM
တိုင်းရင်းသား တပ်မတော်တွေအတွက်လည်း နောက်တစ်ခါမှာ မိန့်ခွန်းပြောပေးပါဦးခင်ဗျာ
2021-05-08 at 6:44 PM
2021-05-08 at 7:00 PM
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။မနှေး အမှန် အောင်ရမည်။
J Wai Ni says:
2021-05-08 at 7:31 PM
Zin Nway Oo says:
2021-05-08 at 7:43 PM
ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး တွေကြားမှာ ဒုသမ္မတကြီးဒူဝါလရှီးလ အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ🙏
Thandar Ni Anthony says:
How sweet speach, right leaders are always be nice for each part of nation. THANK YOU VERY MUCH .
2021-05-08 at 8:02 PM
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး ပြည်သူအစိုးရ အကြီးအကဲများ ကျန်းမာပါစေ ဘေးကင်းပါစေ အရေးတော်ပုံ အောင်မည်
2021-05-08 at 8:20 PM
ဒုတိယသမ္မတကြီး သက်ရှည် ကျန်းမာ ​ဘေးရန်ကွာ၍ နိုင်ငံ​ကောင်းကျိုးကို စိတ်ရှိတာထက်ပို၍ လုပ်​ဆောင်နိုင်ခွင့်ရပါ​စေ
Myomin Hlaing says:
နိုင်ငံတကာအကူအညီ မရရင် NUG ဟာ NGO သာသာပဲရှိမှာပဲ
အဲ့တော့ ပြည်သူကို မျက်နှာမူတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ICC နဲ့တကယ်ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ချင်ရင် Rohingya Genocide တာဝန်ရှိသူတွေကို နှုတ်ထွက်ခိုင်းရပါမယ်
ပြည်သူကိုသာ မျက်နှာမူပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်
Judith Sergayethaw Htoo says:
2021-05-09 at 3:48 AM
Aung Khun Kyaw says:
2021-05-09 at 9:47 AM
ပြည်သူ ဆန္ဒအပြင် ဥပဒေ ရာရီလေရှိရင်ကောင်းမည်ထင်၊
Daw Ohn Kyi says:
Nan Min says:
2021-05-10 at 2:53 PM
ပြည်သူ တွေကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိဘာလျှက်နဲ့ ဘာကြောင့် လက်မခံနိုင်ရတာလဲ စဥ်းစားလိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်
Spring Revolution_Music Video (May 8/2021)